चर्चित अभिनेत्रीको लज्जास्पद उत्तर : नेपालमा १४ वटा जिल्ला छन्
१४ असार २०७७, आईतवार २०:०३
चितवन – नेपालमा कती वटा जिल्ला छन् भनेर प्रश्न गर्ने हो भने जो कोहीले पनि सजिलै उत्तर दिन सक्छन् – ७७ वटा । विद्यालयदेखी नै पढ्दै आएको बिषय हो यो । त्यसैले जो कोहीलाई थाहा छ की नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन् ।
तर नेपालकी एक चर्चित अभिनेत्रीलाई नेपालमा कती वटा जिल्ला छन् भन्ने नै थाहा छैन भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी अभिनेत्री पूजा शर्मालाई नेपालमा कती वटा जिल्ला छन् भन्ने पनि थाहा रहेनछ । बरु उल्टै पूजाले ७७ जिल्लालाई १४ मा झारेकी छिन्।
एक अन्तरवार्ताको क्रममा प्रस्तोताले पूजालाई प्रश्न गर्छन् – नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन् ? यो प्रश्नमा पूजा अक्क न वक्क हुन्छिन् । पूजाले जवाफ दिन नसकेपछि प्रस्तोताले भन्छन् – यो कुरा छोडौं, नेपालमा कती वटा जिल्ला छन् ? यो प्रश्नमा पूजाले दिएको जवाफ सुन्दा जो कोहीलाई हाँसो र लाज लाग्न सक्छ । उनको जवाफ छ १४ । उनले नेपालमा १४ वटा जिल्ला भएको जवाफ दिन्छिन् । उनको जवाफ सुनेर प्रस्तोता स्वंय हाँस्दै भन्छन् – गज्जब भन्नु भयो ।
अभिनेत्री हुँदैमा सबै थाहा हुनै पर्छ भन्ने होइन तर आफ्नै देशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेर पनि थाहा नहुनु आँफैमा लज्जापद बिषय हो । नेपालमा ७ प्रदेश, १४ अञ्चल र ७७ जिल्ला छन् भन्ने जो कोहीलाई पनि थाहा भएको र हुनै पर्ने बिषय हो । तर चर्चित अभिनेत्रीलाई यती बिषय पनि थाहा नहुनु साह्रै अपाच्य बिषय हो ।
अहिले पूजाको उक्त भिडियो क्लिप सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएको छ । उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने मिम, ट्रोल बनिरहेका छन् । पूजाको उक्त भिडियो हेरेर अर्की अभिनेत्री सुश्मा कार्कीले आफुलाई लाज लागेको बताएकी छिन् । इन्स्ट्राग्राममा स्टोरी हाल्दै लेखेकी छिन् – ‘नेपालमा कतिवटा जिल्ला र प्रदेश छन् भन्ने ज्ञान नहुने नेपालका हिरोइन देखेर लाज लाग्यो । छिःछिः ।’ पूजाले यस बिषयमा अहिलेसम्म केही बोलेकी भने छैनन् ।
म्यासेन्जरमा विद्यार्थीलाई आपत्तीजनक म्यासेज गर्ने चितवनका शिक्षक पक्राउ